Qaraxyadan maadaama laga sii digey maxaa looga gaashaaman waayay? Yaa se Xalane ogaysiiyay Sirdoonka dalkana ka qariyay? | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Qaraxyadan maadaama laga sii digey maxaa looga gaashaaman waayay? Yaa se Xalane...
Qaraxyadan maadaama laga sii digey maxaa looga gaashaaman waayay? Yaa se Xalane ogaysiiyay Sirdoonka dalkana ka qariyay?
(Muqdisho) 23 Maarso 2019 – Haddii hay’adaha Xalane degan ay sii ogaayeen qaraxa maxay sirdoonka Soomaaliya uga hortagi waayeen?
Isbuucii hore ayaa shaqaalaha Qaramada Midoobey iyo dadka hay’adaha kale la shaqeeya loo diray farriin ah in ay Muqdisho ka dhici doonaan qaraxyo meelo muhiim ah lala beegsan doono sidaa darteed ay shaqaaluhu feejignaadaan.
Farriintaan waxa ay ka timi Xerada Xalane oo ay degganyihiin in kabadan 150 shirkadood oo ajaaniib ah, Safaarado iyo Qaramada Midoobey.
Saakay waxaa dhacay qaraxyadii ay ka digayeen weliba waxaa la beegsaday meelo muhiim ah sida Wasaaradda Shaqada.
Meelahan dadka caadiga ah marka ay gaari wataan waa lagu jikaaraa oo waxaa yaala baro baaritaan oo adag.
Haddaba, waxaa mudan in la is waydiiyo hadii xafiisyada Xalane laga ogaa qaraxa muxuu Sirdoonka Soomaaliya uga shaqo gali waayay?
Muxuuse horta Sirdoon u yahay haddiiba aanu war heli karin ama haynin? Yaa se Xalane u sheega weerarradan? Haddii se ay ogaadeen maxay u baahiyeen oo ay ula wadaagi waayeen Sirdoonka Soomaaliya?
Sidee gaadiidka qaraxa sita ku dhaafay ciidamada meel kasta jooga?
Previous articleKenya oo sheegtay inay heshay dokumenti sir ah oo muujinaya inay Somalia ka been sheegtay baloogyada ay bandhigtay (Daawo)
Next articleDEG DEG: Somalia oo u yeertey danjireheeda Switzerland (Sabab la xiriirta ka aamusidda qaraarkii Golan?)